Umbala weNook unokuqhuba usetyenziso lwe-Android | I-Androidsis
Izolo, inkampani Barnes & Noble ikhutshwe eya kuvumela i kuqhuba usetyenziso lwe-Android kweyakhe Umbala weNook e-reader. Oku e-book umfundi baleka ne Android 2.1 kwaye yakhawulwa njengomxube phakathi kwe-e-reader kunye nethebhulethi.
Ngapha koko, abanye abasebenzisi bakwazile ukufaka ngokungafanelekanga ii -apps ze-Android kuyo. Nangona kunjalo, uninzi lukhetha ukungazenzi uhlengahlengiso kwisoftware yezixhobo eziphathwayo, kule meko I-Nook Clolor, ngenxa yokoyika ukuphulukana newaranti yakho.
Izicelo ezenzelwe inkqubo yokusebenza kwefowuni kaGoogle ziya kufumaneka kubasebenzisi beMibala yeNook phakathi enyakeni. Iiapps ezintsha ziya kuvavanywa kumgangatho nguBarnes kunye noNoble ukunqanda amalungelo obunini kunye nemxholo okhubekisayo.
Sele ngo-Okthobha kunyaka ophelileyo i-Barnes & Nobles bekhankanyile umnqweno wabo wokunikezela ngeembaleki izicelo ze-Android kuhlobo lwamva lwakho umfundi ebook.
Ukuba iBarnes neNoble iyayenza le nguqulelo, umbala wayo weNook ungayeka ukuba ngumfundi olula we-e kunye nomoya wethebhulethi ngokwakho. Kwingcinga yesibini, ngekhe ibe mbi kwaphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Ezinye izixhobo » Umbala weNook unokuqhuba usetyenziso lwe-Android